स्थानीय तह आएपछि हामीलाई फाईदा के ? यो प्रश्नले मेराे मनमा बारमबार घोचिरहन्छ । घर-घरमा सिहंदरबार भन्नुकाे अर्थ पहिले काठमाडाैंमा माधै एकीकृत भएकाे सिंहदरबाट दिइने सेवा घरघरमा विभाजन गरिने हाे ।
तर यहाँ त गाउँगाउँमा सिंहहरु आए, दरबार आएन् । साच्चिकै पुगेकै छन् सोझा सिधा गरिब दुखी जनताको घर -घरमा सिहंदरबार । यस्तैलाई गाउँगाउँमा सिहंदरबार भन्दैभन्दैन् ।
यदि घरघरमा सिहंदरबार आउथ्यो भने ३/४ घण्टा हिडेर खाद्यान्न जुटाउन जानुपर्ने थिएन होला । भाेक भोकै बाच्नु पर्ने थिएन होला । सम्भावना प्रशस्तै हुँदाहुदै जनताहरु अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुने थिए होला ।
फोन गर्नेलाई डाँडाकाँडा खोज्दै धाउनुपर्ने थिएन होला । स्कुल/कलेज खोज्दै शहर बजार घुम्नु पर्ने थिएन होला । कोहि कसैले पनि अस्पतालमा नपुगी अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन होला ।
खासगरी जनताहरुले चाहिएको यिनै सुबिधा हो । अनि यी सुबिधा नै नपुगेका ठाउँहरुमा सिहंदरबार पुगेकाे भन्नै मिल्दैन् । मलाइ त सुन्दा नि अचम्म लाग्छ जहाँ अहिलेसम्म सडक बाटो पुगेकै छैन, विद्युत सुविधा छैन्, ईन्टरनेटका त कुरै छोडौ फोनले नि काम गर्दैन, अन्य विकासको त झन् के कुरा गरौं र ! अनि त्यहि सिंहदरबार पुग्याे भनेर ठुलाठुला भाषण छाट्छन् ।
स्थानीय तह आयो अब त सबैलाई सुविधा हुन्छ भनेर हिजाे चुनावमा नारा घन्काउनेहरु आज महाराज नै बनेर सिंहजस्तै गरेर गाउँगाउँका दरबारमा बसेका छन् । म मेरै गाउँपालिकाकाे कुरा गर्छु । गंगादेव गाउँपालिकाकाे कार्यालय आउन ५/६ घन्टा समय लाग्छ । गाउँपालिका कार्यालय उपयुक्त ठाउँमा नराखी आफ्ना घरघडेरी हुनेतिर राखिएका छन् ।
खै अब कसरी गर्लार जनताहरुले तिम्रो विश्वास । तिमीहरुदेखि न तिम्रा कर्मचारीहरु सन्तुष्ट छन्, न जनताहरु नै सन्तुष्ट छन् । सुन्तुष्ट पार्नलाइ तिमीहरुले के नै राम्राे काम गरेका छाैं र ।
स्थानीय तह भएपछि जे फाईदा भएकाे छ त्याे अहिलेका जनप्रतिनिधि र तिनका नजिकका नातागाेतालाइ भएकाे छ । त्यसैले यी जनप्रतिनिधिहरुले यो पटक मात्रै नेतृत्व गर्ने । अर्काेपटक त तिमीहरुलाइ जनताले पक्कै हराउनेछन् ।
यसपटक त तिमीहरूलाई भयो । किनकि तिमीहरुले कमायौ, तिमीहरू नै रमायौ । तिमीहरूले नै लियौ ठेक्का । तिमीहरुले नै बजेट हिनामिना गरेउ । माथिबाट आएको बजेट सबै तिम्राे लागि भयाे । अनि कहाँबाट हुन्छ त जनताहरुलाई सुविधा ? कहाँबाट हुन्छ त हाम्रो विकास ।
केहि रोजगार खुले पनि तिम्रै छोराछाेरीहरुलाइ जागिर खुवाइन्छ । यो स्थानीय तह तिम्रै निजी कम्पनी जस्ताे भयाे । जनताको लागि आएको सिहंदबार भन्न त तिमीहरुले लाज मानुपर्ने हाे ।
हुनत तिमीहरुको न क्षमता भयाे, न पढेरै आयाैं । न तिम्रो योग्यता नै छ । त्यहि भएर हाेला अहिले राम्रोलाई फाल्छौं र नराम्रोलाई पाल्छौ । आफ्नोलाई राख्छौं, अरुलाइ फाल्छाैं । बिचारा राम्रा मान्छेहरु त गरिब दुखिको छोराछोरीलाई साइड लगाउछौं । हुनेखाने ठुलाठाली र तिम्रा कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई छनोट गर्छौं ।
बिचारा गरिबको छोराछोरीको मेहनतलाई कहिले बुझेकाछौं । कहिले आउछन् अब तिम्रा सकारात्मक सोच र कहिले गर्छौं अब सबैलाई सम्मान ब्यवहार ।
कहिले दिन्छौं सबैलाई निष्पक्ष न्याय रकहिले गर्छौं चौतर्फिपुर्ण विकास । तिम्रो आस गर्दागर्दै सबैको भैसक्यो बेहाल। कहिल्यै स्थिर हुने भएन हजुर हाम्रो देशको सरकार ।